लभ गुरु रेखा लाई प्रश्न – Rekha Thapa
उदाहरणको लागि, हामीलाई प्राप्त केही प्रश्नहरु प्राप्त भएको छ रेखा थापाबाट यी प्रश्नको उत्तर प्राप्त भए पछि यहाँ पोस्ट गरिने छ :
प्रश्न १ – मेरो प्रेम शुरु भएको तीन बर्ष पुग्न थाल्यो। अब बिहे गर्ने प्लान छ। उसले मलाई पहिले जति माया गरेर बाहिर देखाउथी त्यति पनि देखाउँदिन। आफ्नो जिद्दी छ, कुनै कुरा सम्झाउंदा बुझ्दिन, मान्दिन। सबै कुरा म नै राम्रो छु भन्छे। अनि धेरै केटाहरुसंग नजिक हुने उसको बानी छ ।
म के गरुं। न त छोड्न नै सक्छु। हाम्रो सम्बन्धको बारेमा उसको घर र मेरो घरमा सबैलाई थाहा छ। मेरो त बुवा आमा पनि हुनुहुन्न। यस्तो अबस्थामा एउटा राम्रो साथ चाहिँदो रहेछ। कुनै बेलामा त आत्महत्याको प्रयास गर्न मन लाग्छ। के मलाई यस बाट सुख मिल्छ त ? पहिला यस्तो थिइन, यस्तो गर्न थालेको ५-६ महिना हुन थाल्यो। म के गरुं?
प्रश्न २ – मेरो घरनेर एक जना केटीको घर छ । उनि मलाई हेरिरहन्चिन म पनि उनीलाई अति नै मं पराउछु । तर बोल्न सक्दिन। फेरी हाम्रो थर पनि मिल्छ । अब म एक पल पनि उनको मायामा तड्पिन सक्दिन। अब माया गर्न के गर्नु पर्छ होला। के उनले पनि मलाई माया गरेको होला त ?
प्रश्न ३ – म उनीलाई धेरै मन पराउछु माया पनि गर्छु, मलाई त यस्तो लाग्छ म अब उनी बिना बाच्न पनि सक्दिन। तर उनले मलाई कुन रुपले हेरिरहेकी छिन त्यो भने थाहा पाउन सकेको छुइन । जति बुझ्न प्रयास गरे तर सकिन । यस्मा तपाईले कस्तो सल्लाह दिनु हुन्छ?
उत्तरको लागि प्रतिक्षा गर्नुहोला
This entry was posted in Love Guru and tagged Love Guru. Bookmark the permalink.
← Kali releasing in about 80 theaters all over Nepal
Kali clashes with Damini – and wins →
4 thoughts on “लभ गुरु रेखा लाई प्रश्न”
malai ta timro love guru lekha g le muhani lagai diyo ma k garu lekha g lai pauna…..
rekhag ma narilae adar,saman,biswass,garxu,premma dhani,garivejat,vat hudaina vanxa/ aja pani21 shadawima pani hatana sakeko xaena/ma yastai beshara bhidhuwa nari saga prem garna puge 4/5 sall sagaini basem tara aja mero garive karan le ma bedisina puge gayako 1 salma usko bollae bani sabai chanje paya/arui sagai moterbikema ghumna ramauna thalexa /ma videsko samaya abhdi pura garera aya.maele kathmandu bolaya unita ayanan/ rekhag maelle paxi bhet gare hijo sadhai sath dinxxu bhanelle manferexa usaile aru saga vivha garnu vani/ajaa usai ko salla anusar vibha gare/rekhag ahile ayara uslae vulna sakiraheko xaena vulxu vane nasakido rahexa rati madherata bhiuje pani unikai yad auxa/aja mero sreemati xa bachcha xa/tasaile ma usalae sadhako lagi bhulnu chahanxu /tyoesto vulne ausadhi kehixa vani rekhag tapaeko salla sujhav paya jeevanma khusi huna sakinxaki sujhav paya avari hune thiya//from//sarlahi
1.mero biwaha vaisakyo.unilai thaha xa tara pani kina unle masanga prem garna khojxin.plz ur comment ok..
Rekha g add me